Maitiro Akakosha eEndaneti Kushambadzira | Martech Zone
Maitiro Akakosha eEndaneti Kushambadzira
Chipiri, April 29, 2014 Wednesday, April 30, 2014 Douglas Karr
Email kushambadzira inoenderera kuve nzira yechokwadi yekubatanidzazve, kuchengetedza uye kukwezva vatengi. Pachiripo zvinonetsa kupinda muinbox, kuchine marongero anoburitsa mhedzisiro yezvikwata zvinobudirira zvekutengesa email.
The 2014 Adestra / Econsultancy Email Kushambadzira Indasitiri Census yakaongororwa pamusoro pevashambadzi ve1,100 edhijitari uye vakafunga kuti ndeapi hunhu hwakakosha mukugadzira kushambadzira kweemail timu yekurota.
Kune mamwe matanho akakura ekutsigira yako email nzira dzekutengesa pane iyo infographic:
83% yemakambani rate email kushambadzira seyakanaka kana yakanakisa yekudzoka mukudyara.
63% yevatengesi pedza anopfuura maawa maviri pane dhizaini uye zvemukati asi chete 17% pedza kanenge maawa maviri mukugadzirisa.
49% yevatengesi funga yavo yekushambadzira otomatiki mashandiro asina kubudirira.
47% yevatengesi gonesa email nhare asi 61% vane zvinhu or kusavapo nhare mbozha.
Tags: eemail kushandisa michinaemail zvakanakisa maitiroemail optimizationemail optimizationemail kushumaemail timunharembozha emailnharembozha kushambadziramobile marketing
Uchishandisa Zvemukati Zvekushambadzira Maitiro muB2B Maemail
Email inoramba iine simba rekushambadzira chishandiso chemafoni nhare. Nekukurumidza kukura kwekushandisa kwe smartphone muAsia uye nepasirese, uye vashambadzi vane mukana wegoridhe. Ndiyo imwe yatisingakwanise kuregeredza.